Joseph Sheridan Le Fanu. New gore rekuzvarwa kwake | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Nyaya, Zvinotyisa
Joseph Sheridan Le Fanu akazvarwa pazuva rakaita nhasi 1814 en Dublin. Akatanga kunyora nyaya dzinotyisa gore mushure mekupedzisa zvidzidzo zvake paTrinity College, kunyangwe akazvipira kuna utori venhau, kuti aikwanisa kusanganisa nemabhuku. Inoonekwa se baba yeiya inonzi nyaya dzechipoko. Iye zvakare akaburitsa 14 enganonyorwa uye ngano yake yemampires, Carmilla, ndiwo musoro wako chinonyanya kuzivikanwa. Uku kuongorora kwebasa rake.
3 Zvinyorwa zveDr. Hesselius
4 Cloostedd's Chiporofita
5 Sekuru Sirasi
6 Imba iri padyo nemakuva
Baba vake, avo vaive mufundisi wedzinza reHuguenot, vakamutumira kukoreji ine mukurumbira yeTrinity College muDublin kunodzidza zvemutemo. Asi Le Fanu haana kumbobvira akamboshanda segweta uye aive akazvipira kutapi venhau. Zvanga zviri munyori wenhetembo zhinji, mabharadhi uye nyaya pfupi iyo yaakaburitsa mu Dublin University Magazini, izvo akapedzisira ave director uye muridzi.
When mukadzi wake akafa Muna 1858, Le Fanu akabva pamudyandigere kubva pahupenyu hwemagariro kuti ave munyori wetsika dzemanheru uye anofarira zvemashiripiti, zvekuti akazivikanwa saThe Invisible Prince. Inoonekwa seimwe yeiyo masters makuru ekutyisa kunoshamisa kubva panguva yeVictorian.
Yakatanga kubudiswa mumagazini Rima Bhuruu mu 1871 uye inoratidza shanduko mukugadzirwa kweiyo mukadzi vampire mune zvinyorwa zvepasirese. Ndiyo yakanyanya basa rine mukurumbira naLe Fanu uye mumwe weavo vanofungidzirwa masters e gothic inotyisa mhando. Uine anonakidza protagonist, Iyo zvakare inomira kunze kwekuita kwayo uye kuvaka kukuru kwevamwe vatambi uye iyo mhepo mvura nenzvimbo kwasviba, nguva dzose pakati pemhute yemasikati neusiku. Zviri muenzaniso we DraculanaBram Stoker, iyo yaisazooneka kusvika makore anoda kusvika makumi matatu gare gare.
Iwe hauzive kuti ndinokuda zvakadii, uye haugone kufungidzira kuwedzera kuvimba. Asi ini ndakasungwa nemavhoti mashoma; hakuna sista akavaita hafu inotyisa. Uye ini handishinga kutaura nyaya yangu, kunyangwe iwe. Nguva iri kuuya apo iwe uchafanirwa kuziva zvese. Iwe unondifunga seane hutsinye uye ane udyire kwazvo, asi rudo runogara ruchizvida kunyanya kuda, ndipo paunonyanya kuzvifunga. Hauzive kuti ndine godo sei. Iwe unofanirwa kuuya neni, uye unondida, kusvika kurufu kana kuvenga ini, asi gara neni, uye Ndivenge kuburikidza nerufu uye shure kwaro. Iko hakuna izwi kusava nehanya mune yangu yekusaitira hanya hunhu.
Zvinyorwa zveDr. Hesselius
Iri ibhuku rinounza pamwechete ina dzenyaya shanu dzakanyorwa naLe Fanu nezvechiremba anova nyanzvi mune zvemashiripiti, Martin Hesselius, mutambi akapfuura zvakare anobva kuna Bram Stoker's Van Helsing kana Algernon Blackwood's John Silence.
Inosanganisira: Green green, muchimiro che epistolary nyaya apo Dr. Hesselius anozoferefeta nyaya yezvimwe zviratidzo zvadhiyabhorosi zvinotungamira Reverend Jennings kuzviuraya; Izvo zvinozivikanwa, imwe yenyaya dzake dzakabudirira kwazvo; Mutongi Harbottle, nezve zvinoitika zvisingazivikanwe mune imwe imba inoshamwaridzana muWestminster; nezvambotaurwa Carmilla.
Inotaurira nyaya ye kukwikwidzana kwekare pakati pemhuri mbiri kubva kuguta diki muEngland, Golden Friars, uye kubva ku zvinotyisa kutsiva. Changamire Bale Mardykes, munhu anokara, anopomera munyori wake mudiki Phillip akanzwa yekutsakatika kwerunyorwa rwebhangi. Zvinosuruvarisa, Phillip anotiza imba iri mukati medutu hombe uye achangowanikwa mudziva riri padyo.
Imwe yeaya mabasa, muchimiro chemacabre chakavanzika inoverengeka, umo kugona kwekurapa uye kukwirisa kwekutyisa kwaaive nako kunoratidzwa Le Fanu. Saka, ne nostalgic yekutanga toni pakutanga kwerondedzero yezve ndangariro dzemukadzi mudiki, inopera nekutungamira muverengi mugumo wakafa umo a kuponda kunotyisa.
Imba iri padyo nemakuva
Gara mu zana ramakore XVIII, mumusha weIrish unonzi Chapelizod, uine hupenyu hwemagariro uzere nekunyongana, hukama husina mutsigo uye zviitiko zvisinganzwisisike, ino ino inotaura zvinoitika kana netsaona ndakafukunura dehenya rine zviratidzo zviri pachena zvechisimba kunge gomba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Joseph Sheridan Le Fanu. New gore rekuzvarwa kwake